नेपाल आज | महानवमीमा महान महिलाको कथाः कलेजो दान गरी बरिष्ठ सर्जनलाई बचाएकी शान्ता ! (भिडियोसहित)
महानवमीमा महान महिलाको कथाः कलेजो दान गरी बरिष्ठ सर्जनलाई बचाएकी शान्ता ! (भिडियोसहित)
दशैं अर्को हिसावले भन्दा नारी शक्तिको स्मरण गर्ने सन्दर्भपनि हो । महानवमीमा भवानी भगवतीको पूजाआजा हुने गर्दछ । उदाहरणीय काम गरेका तर ओझेलमा परेका कैयौँ नारी हाम्रो समाज छन् । त्यस्तै मध्येकी एक हुन्: शान्ता पोखरेल दाहाल ।
उनका श्रीमान चर्चित पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल हुन् । उनी आफैँपनि रेडियोकर्मी हुन् । उमेरले झण्डै पचास पुगेकी शान्ताको जीबनमा उनको आफ्नै स्वतन्त्र परिचय सायदै कहिल्यै भयो । पहिले बुबाको नाममा उनलाई चिनियो, त्यसपछि उनी श्रीमानका नाममा चिनिइन् ।
बर्दियाको प्रतिष्ठित परिवारकी चेली शान्ताको पछिल्लो समय विल्कुल फरक पहिचान बनेको छ । कलेजो दान गरेर मामा बचाउने भान्जी अर्थात महान महिला ।
२०६८ सालमा मामा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माको कलेजोमा खराबी देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका निर्देशक रहिसकेका बरिष्ठ सर्जन गोविन्दको नाजुक अवस्थाका बारेमा सर्वत्र चर्चा भयो । उनी पदमा आसिन हुँदा लाभ लिनेको संख्यापनि ठूलै थियो । उनको पारिवारिक हाँगोपनि चारैतिर फैलिएको थियो । जब उनी रोगले थला परे र मृत्युशैयामा पुगे, आफ्नै भनिएकाहरु परपर हुन थाले ।
शुरुमा कलेजो दान गछौँ भनेकाहरुपनि साच्चै नै गर्नुपर्ने देखेपछि हच्किए । गोविन्दले आफन्त र प्रियजनसँग जिन्दगीको बिट मर्दै गरेको दुःखद प्रसंग सुनाउन थाले । चिकित्सकले पनि समय तोकिसकेका थिए । शान्ताले मामाको अवस्थाका बारेमा सुँइको पाइन् । आफैँपनि बिरामी भएकाले उनलाई बाहिरफेरको अवस्थाका बारेमा उतिसारो चासो लिएकी थिइनन् ।
जब उनले मामाको अवस्थाका बारेमा बुझिन्, सिधैँ फोन गरेर भनिन्, ‘मामा नआत्तिनु, म दिन्छु हजुरलाई कलेजो ।’ असल व्यक्तिलाई बचाउँनु उनले आफ्नो कर्तव्य सम्झिइन्, त्यसमाथि गोविन्द आफ्नै मामा । उनी भन्छिन्, ‘पहिले दिन्छौँ भनेर पनि भतिजाले दिएनछन्, मेरो मन खिन्न भयो । मैले दाइ (श्रीमान)लाई समेत नभनि दिन्छु भने ।’
त्यसपछि भारतको मेदान्त अस्पतालमा उनले मामालाई कलेजो दान गरिन् । २३ घण्टाको अप्रेशनपछि उनी अर्कै महिला भइसकेकी थिइन् । साक्षात देबीको रुपमा उनी प्रकट भइन् । ‘मामाले मलाई पुर्नजन्म दिने आमा भन्नुभयो । मलाई पनि मामा बचाउँन पाएकोमा खुशी लाग्यो’, त्यतिबेलाको अवस्था सम्झदै शान्ताले भनिन्, ‘उहाँ (श्रीमान)ले साथ नदिएको भए सम्भव हुने थिएन । धेरै दुःख खेप्नुभयो हाम्रो लागि ।’
२०६८ सालमा कलेजो दान गर्दा उनी ४६ बर्षकी थिइन् । मामा ६० नाघिसकेका थिए । अहिलेपनि दुबै स्वस्थ छन् । उनले काटेर दिएको कलेजो पूर्णरुपमा पलाइसकेको छ । उता मामाको मा प्रत्यारोपण गरिएको उनको कलेजोको अंशले ८० प्रतिसत बृद्धि भइसकेको छ ।
मामा विराटनगरमा मेडिकल कलेजको कार्यकारी पदमा सक्रिय छन् । शान्ता काठमाडौँमा समाजसेवा गर्ने ध्याउन्नमा छिन् । उनले शान्ता फाउण्डेशन खोलेकी छिन् । मुख्यतः कलेजो क्यान्सरका बिरामीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित खोलिएको यो संस्थाले सबै खालका क्यान्सर रोगीलाई सहयोग गर्ने शान्ताले बताइन् ।
‘उहाँले (पुरुषोत्तम दाहाल)ले मेरै बारेमा लेखेको उपन्यास शान्ताको बिक्रिबाट प्राप्त रकम कोषमा छ । मेरो पत्रकारिता भन्ने कितावबाट आएको पैसा पनि यसैमा राख्ने कुरा छ ।’ उनले आर्थिक स्रोतका बारेमा प्रष्टाइन् । धेरैले कलेजो प्रत्यारोपणका बारेमा नसुनेको उनले अनुभव गरेकी छिन् । भेटेका अधिकांशले उनलाई ‘कलेजो प्रत्यारोपण पनि हुन्छ र ?’ भनेर सोध्ने गर्दछन् ।
उनी जवाफमा मुस्कुराउने गर्दछिन् । उनका बारेमा थाहा पाइसकेपछि उनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तन हुने गर्दछ । शान्ता फाउण्डेशमार्फत समाजसेवामा जुटेकी शान्ताको मुस्कानमा थप बल पुर्याउन तपाईहामीपनि जुट्ने की ?
kalejo daan Shanta Pokharel